Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta Jwxo Mudane Hassan Moalin oo Waraysi Siiyay Esat Tv.
Daawo: Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta Jwxo Mudane Hassan Moalin oo Waraysi Siiyay Esat Tv.
Posted by Wariye Qaran	/ September 2, 2017
TV-ga caalamiga ah ee afka Axmaariga ku baxa ee ESAT ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya layeeshay Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO mudane Xassan Macalim Muxumed.
Ugu horayn mudane Xassan ayaa si kooban udul maray taariikhda wadanka Ogadenia iyo halganadii qori isu dhiibka ahaa ee laguxoraynayay dhulka gacanta Gumaysiga kujira ee Ogadenia, wuxuuna hogaanku sheegay in shacabka Soomaalida Ogadenia ay ka go’antahay siiwadida halganka xaqa ah ee Ogadenia kasocda.
Intaas kadib wariyaha ayaa mudane Xassan waydiiyay taariikhda halgame Cabdikariim Sheekh Muuse, wuxuuna hogaanku sheegay in uu halgame Cabdikariim ahaa sargaal katirsanaan jiray guutada 21aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in uu kudhaawacmay difaaca wadanka Soomaaliyeed.
Sidoo kale mudane Xassan macalim ayaa sheegay in uu Cabdikariim hada ahaa mas’uul katirsan gudiga fulinta ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia, wuxuuna intaas kudaray in halgame cabdikariim uu 3dii sano ee udambaysay kusugnaa wadanka Soomaaliya.
Sidoo kale wariyaha ayaa mudane Xassan waydiiyay qaabkii looqabtay halgame Cabdikariim? Wuxuuna sheegay in halgame cabdikariim laqabtay xili uu kusoo dagay hotel kuyaala magaalada Gaalkacayo, wuxuuna mudane Xassan intaas kudaray in uu halgamaagu wax yar kadib galay gacanta nimanka cadawga ugacan galiyay.
Wariyaha ayaa sidoo kale Hogaanka Warfaafinta JWXO waydii jawaabta ay kabixinayaan dhiibitaanka halgame Cabdi Kariim, wuxuuna mudane Xassan sheegay shacabka Soomaalida Ogadenia iyo Jabhada ONLF aysan hilmaami doonin halgame Cabdikariim, wuxuuna sheegay in jawaab ku aadan ay bixin doonaan.
Sidoo kale mudane Xassan Macalim Hogaanka Warfaafinta JWXO ayaa sheegay in talaabada ay qaaday xukuumada Soomaaliya ay tahay mid aan waafaq sanayn sharciga Qaramada Midoobay iyo dhaqanka shacabka soomaaliyeed toona.
Sidoo kale hogaanka warfaafinta JWXO mudane Xassan ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ku hongoobeen rajadoodii iyo kacdoonkii ay sameeyeen ee ay kusoo saareen ninka madaxwaynaha ka ah Soomaaliya.
Ugu dambayntii wariyaha ayaa mudane Xassan waydiiyay waxa uu kulatalinayo shacabka Ogadenia iyo shucuubta kala duwan ee Itoobiya, wuxuuna mudane Xassan sheegay in shacabka lagumaysto uu ugu baaqayo in ay umidoobaan sidii ay uga xoroobi lahaayeen gumaysiga mudada dheer dulsaaran.
Gabagabadii Hogaanka Warfaafinta JWXO ayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay umidoobaan sidii ay uga gaashaaman lahaayeen kuwa gumaysiga u adeega ee madax kusheegta ah.